ikhaya » iindaba » Kulukhuni ukugcina i-intanethi isevisi engenammiselo
Kulukhuni ukugcina i-intanethi isevisi engenammiselo
"Thina sonke sibaxabisa kakhulu umsebenzi wakho apha, kodwa zonke izinto ezilungileyo kufuneka ziphele." - Randolph, "Free Willy, "Warner Bros., 1993
Iimfundo kunye nososayensi zihlakaniphile ... kodwa nazo ziyizintloni!
Uxolo, abantu, kodwa ukhona.
Emuva phakathi kwe-60 bafika ngombono ongeyantliziyo yokuxhuma oontanga babo ukuba batshintshele ulwazi lwezesayensi kule nto babibiza ngokuba yi-ARPANET (i-Advanced Research Projects Agency Network) e-MIT's (i-Massachusetts Institute of Technology) ebizwa ngokuthi "inethiwekhi ye-galactic".
Ngejubane lokuqala lokubonika kwe-2.4 kbps (iikhibitshi ngomzuzwana) ngokukhawuleza kwinqanaba, baxhamle amaziko amane kwaye bawandisa nakwamanye amaziko esayensi (kwaye bahambisa isantya kancane).
Emva koko i-DARPA (i-Advanced Advanced Projects Agency Agency), abantu abaxhaswe ngemali kwiprojekthi, bathi siya kukhulula kwihlabathi-sikhulule kwihlabathi lonke.
Enye yeyokuqala eyongeziweyo yinkonzo yeCERFnet (i-California Education Research Foundation).
Kwakungenasiphoso nangasemva ukuba uPush Mohta (umseli weSan Diego-based firm) wabuza uVint Cerf (omnye wabasunguli be-intanethi yokuqala) ukuba kwakulungile ukudibanisa igama lakhe nenhlangano ... wavuma.
Kwi-beat-up VW van, bahamba bejikeleza i-state-run cable, bongeza iibhokisi ze-dial, kunye nokwenza abantu bakwazi ukunxibelelana, ukuphanda, ukutshintshana imibono / ulwazi kunye ... ne-imeyile.
Ngokukhawuleza, ukukhubeka, inkululeko yonxibelelwano yonxibelelwano kwihlabathi lonke kwaye yaba yinto ebalulekileyo yezoshishino, ishishini, urhulumente, ukuzizonwabisa kunye nobomi bentwana.
Njengoko uMarko Wahlberg uchaza ukubaluleka kwayo kwintengiso yomboneleli wenkonzo yakutshanje, "Ukutya, amanzi, intanethi, sidinga ukuba siphile."
Ngokuqinisekileyo kuyinyaniso kwi-4B kunye nabantu abajikeleze ihlabathi lonke, nangona abaninzi beza kufuneka bafike ngokukhawuleza ukukhawuleza / ukudibanisa.
Ngokuqinisekileyo, oko kushiya i-4B kunye nabangenako ukufikelela okanye mhlawumbi basebenzise imali encinane abenzayo into ebaluleke kangako njengokutya, amanzi ahlanzekileyo, indawo yokuhlala.
Uyazi, ngaphantsi kwezinto ezibalulekileyo!
Oku kunzima kulabo bahlala kwi-bubble yeSilicon Valley (kungekhona ihlabathi lenene) ukuze bafikelele.
Ukukhawuleza kwexesha - Awunakuze ube ne-bandwidth kakhulu okanye ulayishe / ulayishe ngesivinini esheshayo; kodwa oko konke kuxhomekeke ekubeni nakho kwe-ISP ukunikezela ngokusemgangathweni ukusebenza okunokwenzeka kubathengi.
Kuyinyani ukuba abanye abantu banomxholo othe wuleza kwi-intanethi kunokuba siyenze - iNingizimu Korea, i-Iceland, iNorway neSweden; kodwa kusenelisekile ukuzalisa zonke izikrini ngezinto ezifunekayo ukuba sibe nazo "ubomi bethu".
Ihlabathi lenze phambili ngokukhawuleza kwi-4.1 kunye neebhiliyoni ngokukhawuleza, ngenxa yobuchwepheshe befowuni kunye nomnxeba
Ewe, sithatha ukuba bonke baya kusebenzisa iifowuni ze-3G / 4G.
Kodwa ngelishwa, i-1.6B kunye nabantu bahlala kwiindawo apho umbhobho omkhulu weselula awufumaneki.
Emazweni asakhulayo (kwimpuma-mpuma ye-Asia, iPacific, i-sub-Saharan Africa, ininzi ye-Indiya kunye ne-China), akukhona nje kuphela into engeyinyani, ayithethi.
Kodwa xa befumana ukudibanisa okucekisayo, bafumana ikhompyutha kwipokethi yinto abangenakuhlala ngaphandle kwaye kufuneka babe soloko benxibelelwano.
Idatha eqhutywa - Nangona idivayisi yeselula yaqaliswa ukunika abantu ithuba lokuthetha-nangona xa bebakho kude nefowuni yabo, ii-intanethi kunye neenkonzo zewebhu zakhawuleza zenza iifowuni ezintathu zeefowuni zibiza emva koko, zifaniswa nokudluliswa kwedatha ye-3GB.
Khawucinge ukuba unokuba phi - amakhulu emakhilomitha kude neofisi yakho - kwaye abantu banokuthetha nawe.
Emva kokuba ndiseMidwest ukuya kukugubha usuku lokuzalwa kukabawo kwaye ndafumana ifowuni evela kumxhasi / umhlobo wase-Osaka.
Ndazikhupha, ndaphuma ndaza ndafumana "umhlangano" we-30.
Xa ndabuyela, uTata wabuza ukuba ngubani kwaye ndamxelela.
Wandijonga ngamehlo akhe, ebuza amehlo, waza wabuza, "Wazi njani ukuba akubize apha?"
Olunye iteknoloji othabatha nje ngokukhawuleza.
Kodwa kuninzi lwethu, umnxeba wangempela yinto ekhoyo ngenxa yokuba: a) abayi kuba khona kwaye kuya kufuneka ushiye umyalezo; b) ngokwenene awufuni inkxalaba ende, inomdla kwaye kufuneka nje ukuba ubhale into ethile kubo okanye c) ufuna amaqela omabini ukuba abe "irekhodi ebhaliweyo."
Into engenafowuni kwipokoth / isikhwama sakho sinamandla ngaphezu kwekhompyutheni ethatha amadoda kwinyanga kwaye yenza izinto ezininzi kuwe. Ukongezelela ekunikezeni ukufikelela kumaziko akho eendaba ezentlalo kunye namafilimu / iividiyo, ungayisebenzisa ukuthumela / ukuthumela i-selfie kwaye ukhangele izinto ozifunayo.
Ukukhula kwedatha - Ukudluliswa kwedatha kuye kwanda ngokukhawuleza njengoko kuphuculwe umda. Namhlanje, kuqikelelwa ukuba i-80 ipesenti yendlela ithintela ividiyo.
Ingaba kukho ngaphaya kwentambo okanye nge-wireless, sithumela rhoqo, siyifumana idatha kumlambo ongapheliyo.
Kwabaninzi kwihlabathi, akuyona nje iteknoloji enxibelelwano elungileyo, kuyinyathelo ebalulekileyo ekuphuculeni imfundo yabo, impilo yabo / intlalontle kunye noqoqosho lwabo.
Kodwa ... akulula.
Kufuneka ifikeleleke kuba nangona i-smartphone ethobekileyo ngemilinganiselo yase-US ibonisa umvuzo womntu iminyaka emihlanu kwaye ke kukho iintlawulo zenkonzo zenyanga.
Ngexabiso langoku, i-500MB yedatha kwinyanga ayithengiyo kwi-83 ekhulwini labantu baseMzantsi Asia kwaye ayifumanekanga kuma-90 ekhulwini labo bahlala kwi-Sub-Sahara Afrika.
Nangona kunjalo, ifowuni (kunye neendleko zenkonzo) zihlala zibelwana ngeentsapho ezininzi.
Ukwenza ukuba ifikeleleke, amaxabiso ezincedisi / inkonzo kufuneka ahlawule iipesenti ze-90, oko kuthetha ukuba oorhulumente okanye abathwali / ababoneleli kufuneka baxhaswe.
Kulungile, masithi nje singakwazi ukufikelela ngaphaya kwelo "nto encinci". Emva koko simele sibonise abantu ukuba abanesixhobo / inkonzo kubalulekile kubo kwaye ukuba oko bafikelelekayo kubalulekile.
Ngokuqhelekileyo oko kuthetha ukufikelela kumxholo abangayisebenzisa ukuphucula izinto zabo kunye neentsapho zabo kwakunye nemfundo / ukuzizonwabisa abanokufikelela kuzo.
Ubonelela ngeendlela zokuphucula ulwazi / ubuchule babo kwaye kubonelela indlela yokuba babaleke into ekhoyo yehlabathi abajongana nayo yonke imihla, nokuba nje kuphela ixesha elifutshane.
Kuba bantu, ukufikelela kwi-intanethi akungabi yinto ebalulekileyo njengokudla kunye namanzi; kodwa ithuluzi elinamandla lokunika amazwe, uluntu, iintsapho kunye nethemba ngabanye, iingcamango namathuba.
Amanzi aphantsi kwamanzi Amashumi amawaka eekhilomitha zekhefu eziphakamileyo eziphezulu / i-cable-high-power cable zixhomekeke ngaphantsi komgangatho wolwandle ukuze kugcinwe ihlabathi.
Ngelixa iinkcukacha ezibalulekileyo ziyakwazi ukuhanjiswa nge Sathelethi, malunga neepesenti ze-99 zezothutho lomxholo wehlabathi zihamba ngee-wiresea cables.
Ewe, banokuhlanjululwa luhlanga oluthile okanye izinto ezifana neenqwelo zeenqanawa, iminatha yokuloba kunye nezixhobo zokuloba. Heck, kwaneentlanzi zibonakala zibetha ngeenamba eziliqela.
Ukongezelela, iintlekele zemvelo - ikakhulukazi iinyikima-mhlaba - zininzi zengozi.
Ngoxa ukucima ikhefu kwenzeka, kukho "ukujikeleza" njengokufana nokuthumela izithuthi ngezinye iindlela njengoko kwenzeka kwi-2010 xa ukuzamazama komhlaba kweTaiwan kwonakalisa iHong Kong.
Kwakukho umphumo we-cascading echaphazela ukuhamba kwedatha kwi-Asia kwaye ekugqibeleni, emhlabeni jikelele.
Kwathatha iiveki ezingaphezu kweeveki ezintandathu ukuba zibuyele "eziqhelekileyo."
Kodwa ukusika iqela leetambo ngeenjongo ngumsebenzi omningi. Ngokuqinisekileyo akungonwabi kakhulu (ngokubhekiselele kubantu abathintekayo) njengokukhulula iintsholongwane nokuvumela abantu ukuba bakholelwe:
Benceda ngokwenene umhlobo obethayo kwaye amaphepha akhe abiwe kwindawo ethile kwaye kufuneka afike ekhaya
Omnye kwimimandla yemfazwe yehlabathi unemali enkulu yemali kwaye ukhethe ukuba u-outta 'abantu be-7B uncedo lokufikelela kwihlabathi elikhululekile
Inkampani yebhanki / ikharityhulam ongajonganga nayo ifumanisa i-akhawunti yakho
Ubuyatha nokrakra kubangela ukuphazamiseka ngaphezu kweengozi okanye iintlekele zemvelo.
Ewe, ezi ngxaki ezincinane.
Emuva xa uLick, Vint, Push kunye nabanye oovulindlela bokuqala bekhusela i-intanethi yeNtana, "yayinomdla" kodwa akukho bani wanikezela ngeso lesibini.
Emva koko uSerge, uMarko kunye neqela labafundi beekholeji bacinga ukuba kuya kupholisa (kwaye mhlawumbi mhlawumbi kunenzuzo) ukuphuhlisa into eya kukuvumela ukuba ufumane izinto kwiwebhu, into abantu bangayenza izinto ezingaboniyo kwaye bonke abantu bajonge okanye sebenzisa ukulayisha iifoto ezingathandekiyo okanye iividiyo ezingenangqondo abantu abanokujonga.
Kulungile, ngoko izinto zafumana "into encane" ye-outta kwaye abantu babenza ibhakethi yemali yokwabelana ngezinto abangafanele bahlanganyele ngazo. Kucacile ukuba kwakubaluleke kakhulu hayi ukulawula.
Imiqobo - Ngoxa sisoloko sicinga nge-intanethi njengenkonzo eyenza kube lula kwaye kulula ukuthetha nabani na kwihlabathi, kungakhathaliseki ukuba bahlala phi ilizwe; Amazwe anokukwazi ukukhawulela ezinye iintlobo zezithuthi zedatha / ezivela kwimimandla yazo kunye noorhulumente "abanokuwuhlwaya" amazwe ngokuthintela okanye ukunciphisa uxhulumaniso lweenkcukacha.
Wonke amazwe ephasini anelinye izinga lokulawulwa ngokomthetho malunga nokusebenza kwe-Intanethi kwimida yabo, kubandakanya oko kunokunxibeleliswa kunye nokuba yintoni enokwabelwana ngayo / isetyenziswe.
Inkululeko ye-intanethi iyanqabile ukwenzela ukuba ibe ngowesithandathu ngonyaka olandeleleneyo, oorhulumente abaninzi abhekiselele kumajelo asekuhlaleni nakwiinkqubo zonxibelelwano Kungenxa yokuba zisasazeka ngokukhawuleza iindaba kunye neengxelo ezikhohlisayo, ngakumbi ngexesha loqhankqalazo loorhulumente.
Emva koko, kukuphi ukulungela ukuba abantu babe nesixhobo abanokuyichitha amanqaku abo kwaye baxelele wonke umntu malunga nantoni na ukuba urhulumente akafumanekanga kuqala kwiinkcukacha?
Kwaye ke, loo mijelo yoluntu kunye nabantu basebenzi bahle kakhulu ekukhankeni idatha kwi-intanethi ukuthengisa, ukwabelana, ukuchithwa. Iimarike zokuyisebenzisa ukuthengisa iintengiso zedijithali ziqikelelwa ukuba zifanele ngaphezu kwe-$ 80B WW ngonyaka ozayo.
Nangona abantu bathumela, ilungelo "lokuhlonela ubomi babucala nobomi bentsapho" kwaye "wonke umntu unelungelo lokukhuselwa kwedatha yakhe malunga naye" inkulu into eYurophu.
Ngenxa yokuba babe namava angakhululekile malunga nokubanjwa kwedata kwiWWII, abantu baseYurophu banemibono enamandla ngokukhusela idatha yabo.
Ukuze ugweme izinto ezifana nokubeka iliso kunye nokubeka iliso, abantu bamazwe amaninzi basebenzisa amanxibelelwano abucala nakwiinkcukacha zokubambisana ukuze baxhumane kwi-iNet, enokukhathazeka (kunye nokukhawulela) i-arhente ezininzi zokhuseleko.
Ama-SIG (amaqela anomdla okhethekileyo) anokuya kulandelwa, kodwa kuthatha nje umsebenzi omncinci wokungena kwiveli.
Ngoku ukuba i-intanethi ibe yinto ebalulekileyo kubantu njengokutya kunye namanzi, kukho uxinzelelo olunyukayo kumazwe afana ne-US ukuvumela ababoneleli ngeenkonzo ukuba bafumane inkululeko enkulu yokulawula izinga lenkonzo enikezelweyo kunye neendleko.
Kodwa ngokungafani nokukhetha phakathi kwe-iPhone, iGalaxy okanye enye yee-smartphones ezili-12 okanye i-Apple, HP, iDell okanye enye ikhomputha; ukhetho lwe-intanethi yiyo i-ISP (uMboneleli weNkonzo ye-intanethi) unikezela - umgangatho wenkonzo, imida yedatha, indleko.
Akunjalo kanye nabasunguli be-intanethi abasemqondweni. Akunjalo nokuba yi-DARPA yayilindele xa iguqulekile ukuba umhlaba uyisebenzise, ​​nwabe.
Emva kwakho konke, babengenabantu abazinzi-nzuzo kodwa baninzi njengoGlenn, owathi, "Ndisoloko ndibe ngumgca wokuziphatha olungcono kunomlawuli womgaqo, mna. "
Sifanele sibone indlela i-intanethi ekhululekile ehlala ngayo.
CES2017 MStar SoftAtHome SoftAtHome, MStar, iCES2017	2017-09-06
Previous: IBC 2017: I-Product Spotlight- InfinitySet 3 ngeBrainstorm!
next: Isinyathelo sokuSondela ukuya kwiLenadata yokuQinisekisa kweLens
Siphila kwi-intanethi - ukuthetha nabantu emhlabeni wonke, ukuphanda izinto eziphathekayo, ukukhangela kwizinto zevidiyo ezingabhalwayo kwi-YouTube kunye ne-Facebook, umxholo wokusasaza kwisikrini esikhulu kwikhaya lentsapho. Sifumana umrhumo wokubhalisa kubonisa ukusuka kwi-Netflix kunye ne-Amazon Plus kunye neengxelo zentengiso evela kwiVimeo. Kukulungele ukufumana umxholo onje nangona umboneleli wethu wenkonzo engaboni ngokukodwa ukubuka i-4K kwi-4K kodwa kunento into encinane encinane ehamba ngokulula kwi-OTT. Kwakudingeka ukuba uchazele abantwana ukuba izicwangciso zedatha ezingenamkhawulo ezivela kwi "intandokazi" yethu yenkampani kuphela yenguqu yabo engenamkhawulo kungekuyo into endiyibiza ngayo. Ngokuqinisekileyo uhlala ulungele ukwazi ukuba "ba" bagcina ingqalelo yento obukeleyo / ukwenza kwi-intanethi ... ngenxa yethu.
Hey Buddy !, Ndiyifumene le ngcaciso kuwe: "Kuyinto enzima ukugcina i-intanethi isevisi engenammiselo". Nantsi ikhonkco lewebhu: http://www.broadcastbeat.com/its-tough-to-keep-the-internet-a-borderless-ervice/. Enkosi.